Satria mankalaza ny faha-15 taona ny Global Voices, ireto ny lahatsoratra notsongain’ny ekipa Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Fizarana1: Haiti, Trinite & Tobago ary Venezoela
Voadika ny 22 Desambra 2019 17:36 GMT
Desambra — volana mahafinaritra nananganana ny Global Voices tamin'ny taona 2004. Vetivety dia tapitra ny dimy ambinifolo taona, saingy nanome antsika fahafahana namoaka lahatsoratra teo amin'ny 100.000 nandrisika hilahateny ary nadika tamin'ny fiteny hafa ny ankamaroan'izy ireo.
Mbola manako ao amin'ny faritra ny horohorontany taona 2010 nandravarava an'i Haiti. Isaky ny misy voina mitranga, dia misy ny akon'ny (loza) 7.0 Mw izay nandamaka faritra maro tao Port-au-Prince, nahafatesana olona an'hetsiny ary nampiangana olona ho ao anatin'ny toerana miha-marefo hatrany.
Tamin'ny hafaliana lehibe noho izany no nahafantaranay momba ny Kolektif Peyizan Viktim Tè Chabè – fivondronan'ny tantsaha Haitiana nanasonia fifanarahana mana-tantara tamin'ny volana Janoary 2019, fifanarahana manome fanonerana ho an'ireo olona efa ho 4000 izay nafindra toerana mba hanaovana ny fananganana ny Inter- American Development Bank (IDB) sy ny Caracol Industrial Park tohanan'ny USAID ara-bola- tetikasa iray notohanan'ny governemanta Haitiana mba ho tafiditra amin'ny ezaka fanarenana taorian'ny horohorontany, saingy lasa nanitsakitsaka kosa ny zo ara-tany sy ny fiveloman'izy ireo izany.
Tamin'ny volana Jiona 2019, na izany aza, nanao dingana fisoratana anarana ny governemantan'i Trinite sy Tobago, izay nahafahan'ireo mpitady fialokalofana an'arivony nekena ho ara-dalàna, nanakely ny mety hisian'ny fanararaotana azy ireo – fanapaha-kevitra niako taminay ho mankany amin'ny lalana mety eo amin'ny tantara, na inona na inona izay fiafarana ara-politika any Venezoelà.
Tamin'ny 7 febroary 2019, niato vonjimaika ny fihetsiketsehana mahery setra an-dalambe tany Haiti, izay nanomboka ho setrin'ny fiakaram-bidin'ny sakafo. Na izany aza, natao hitohy ny fitroarana ara-tsosialy, satria nateraky ny kolikoly mahahenika ny rafitra ny ankamaroan'ny krizy ara-toekarena sy ara-tsosialy ao amin'ny firenena.
Ao anatin'ny ezaka ataon'ny governemanta hanakiviana kokoa ny fitroarana, nampanantena ny praiminisitra Jean-Henry Céant tamin'izany fa hampihena ny fisondrotan'ny vidin'ny sakafo fototra, hampihena ny fandaniam-panjakana, hampiakatra ny karama farany ambany ary hiady amin'ny kolikoly amin'ny alàlan'ny fanohanana ny fizotran'ny raharaham-pitsarana PetroCaribe. saingy manohitra ny tsy filaminana ara-politika am-polo taona, tonga tamin'ny tsy azo hanoharana ny vahoaka. Maro ny mitaky ny hialan'i Moïse.
Tamin'ny volana martsa 2019, nanolotra vato fitsipaham-pitokisana an'i Céant ny Parlemanta ao Haiti ary toa nandray anjara tamin'ny fanampiana ny firenena hamaha ny krizy i Etazonia. Tamin'ny 9 Aprily, nanendry an'i Michel Lapin ho praiministra vaovao an'i Haiti i Moïse, na dia nanjaka tany amin'ny toerana mafana sy ny manodidina ny renivohitra aza ny herisetran-jiolahy.
Saingy tsy te-hiala tsotra izao ny PertroCaribe. Tamin'ny 31 Mey, namoaka tatitra misy pejy 600 mahery momba ny tsy fahaizan'ny tahirim-bolan'ny PetroCaribe mitantana ny Fitsarana Ambony any Haiti. Mandritra izany, nihitsoka tao amin'ny Senà (Antenimieran-doholona) ny fanekena an'i Lapin amin'ny maha praiminisitra azy; nitady praiminisitra hafa i Moïse tamin'ny Jolay. Tonga ny volana novambra, tsy nisy fivoarana foana tao amin'ny firenena, ka vao maika miharatsy hatrany ny krizy sosialy-toekarena, saika mikatona avokoa ireo sekoly, hôpitaly, tsena sy banky satria niantehitra hatrany tamin'ny hery ny governemanta hamoritra ny fihetsiketsehana.